Amanqaku kaShannon Tucker Martech Zone |
Amanqaku ngu U-Shannon Tucker
Zintoni izinto ezivelayo? Ukuvela linani leebhlo ezinokubakho kwibali lakho okanye kwimithombo yeendaba zosasazo esekwe kubafundi abaqikelelweyo / ababukeli bento / umthombo. Kwi-2019, ukubonakala kuyahlekwa ngaphandle kwegumbi. Akuqhelekanga ukubona ukubonakala kwiibhiliyoni. Kukho i-7 yezigidigidi zabantu emhlabeni: malunga ne-1 yezigidigidi kubo abanawo umbane, kwaye uninzi lwabanye alukhathalelanga inqaku lakho. Ukuba une-1 yezigidigidi ezibonakalayo kodwa uyaphuma